Yimiphi imisebenzi enamathuba amaningi emisebenzi | Ukwakheka nezifundo
Yimiphi imisebenzi enamathuba amaningi emisebenzi
UMaria Jose Roldan | 03/09/2021 11:33 | Ukuphuma Komsebenzi
Esinye sezinqumo ezinhle zalabo bafundi abaphasa iSeleividad, Kuqukethe ukukhetha iziqu zaseyunivesithi ezinesidingo esanele ukuze kungabikho zinkinga uma kukhulunywa ngokubekwa. Kuzoba nenkulumompikiswano njalo mayelana nokuthi ukhetha ubizo yini noma ithuba lomsebenzi elathi linikezwa umsebenzi.
Esihlokweni esilandelayo sizokukhombisa leyo misebenzi enethuba elihle lomsebenzi futhi evumela umfundi obaqedayo ukuthi akwazi ukusebenza cishe ngokushesha.
1 Ukuphathwa Kwebhizinisi
5 Ubunjiniyela bezokuxhumana ngocingo
6 Ubunjiniyela bemvelo
7 Imithombo yabantu
Lo msebenzi uqhubeka nokuba ngomunye unyaka onikeza amathuba amaningi emisebenzi kulabo abaphothule iziqu zawo. Umuntu okhetha lo msebenzi, uqeqeshelwe ukusebenza kwezamabhizinisi, kungaba endaweni yezokuphatha, ukubalwa kwezimali noma ukumaketha. Izinkampani ziyanda futhi lokhu kusho ukuthi kunesidingo esikhulu kulo mkhakha wezomnotho.
Ngokufika kweCovid-19, kukhona igatsha laseyunivesithi elihlaselwe kakhulu emsebenzini futhi alikho elinye ngaphandle kweMedicine. Namuhla imakethe yezabasebenzi idinga ochwepheshe nabaqeqeshiwe abahle ukuze bakwazi ukugcwalisa imisebenzi ehlukene emkhakheni wezempilo. Kunemisebenzi eminingi yansuku zonke yokuhlinzekwa kwabahlengikazi noma odokotela. Iqiniso ukuthi uhlobo lomsebenzi othile ovame ukufundela umsebenzi nokuthi namuhla unikeza amathuba amaningi emisebenzi.
Omunye wemiphumela emibi yesifo esihlasele umhlaba wonke, iqukethe ukwanda kokuphazamiseka kwengqondo okuhlukahlukene. Impilo yengqondo ingabaluleka njengokomzimba, yingakho kufanele kube nochwepheshe be-psychology abakwaziyo ukwelapha ukuphazamiseka okuhlukahlukene okungenzeka emphakathini. Ingcindezi noma ukukhathazeka okubangelwe yilo bhubhane kuholele ekufuneni okukhulu kososayensi bezengqondo kanye nomsebenzi we-psychology kungenye yalezo ezinikeza amathuba emisebenzi kakhulu.
Namuhla ungathola izicelo zayo yonke into futhi lokhu kungenxa yomsebenzi owenziwa ngohlelo noma ochwepheshe be-robotics. I-Robotic igatsha elikhula ngokuqhubekayo futhi lifaka izinkambu eziningi njengokuhlela noma ukwakheka kwedijithali. Akungabazeki ukuthi ungomunye wemisebenzi enamathuba amaningi emisebenzi eminyakeni ezayo.
Ubunjiniyela bezokuxhumana ngocingo
Sekuyiminyaka lo msebenzi ungomunye wabantu abadingeka kakhulu futhi nenkinga edale ubhadane, ukufunwa okunjalo kuye kwanda. I-Teleworking ifakiwe empilweni yansuku zonke futhi izinkampani eziningi sezinqume ukuthatha isinyathelo sokuya kwidijithali. Uma izinombolo ziyinto yakho futhi uthanda igatsha lobunjiniyela, Lo msebenzi cishe uzokunikeza umsebenzi ekugcineni.
Kunokwanda kokuqwashisa ukuvikela imvelo nokuvikela ukuthi iplanethi ingadliwa kancane kancane. Ngenxa yalokhu, omunye wemisebenzi ezodingeka kakhulu eminyakeni ezayo, uzoba unjiniyela wezemvelo. Ukusimama kukhona ezinkampanini eziningi namuhla nasesikhathini esizayo, izinto zizoqina kakhulu. Kumele sivikele iplanethi futhi okunye kwayo kuzoba onjiniyela bezemvelo.
Kungumsebenzi oqhubeka nokunikeza amathuba amahle emisebenzi kulabo abaphothule iziqu zabo. Izinkampani ziyaqhubeka nokudinga ochwepheshe abahle abakwaziyo ukukhetha kahle abasebenzi bakusasa. Ngaphezu kwalokhu, labo ababhekele ezabasebenzi bangokhiye uma kukhulunywa ngenkampani enikezwe ukuphefumula indawo enhle yokusebenza ezuzisa wonke umuntu. Ngaphandle kwalokho abantu abaningi abangakucabanga, inqubekela phambili nobuchwepheshe akuzona izitha zalo msebenzi wasekolishi.
Ngamafuphi, Kuneziqu eziningi zaseyunivesithi ezinikela ngendlela enhle yokuphuma ezingeni lomsebenzi. Lnoma okulungile ukulandela ubizo nokuthi umsebenzi uqobo unesidingo esihle ukuze kungabikho zinkinga uma kukhulunywa ngokuthola umsebenzi. Noma kunjalo, ungabheka le misebenzi, okuyiyona enamathuba amaningi emisebenzi namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izifundo » Ukuphuma Komsebenzi » Yimiphi imisebenzi enamathuba amaningi emisebenzi
Isifundo sesibili sethuba lesifundo esisha
Yini okufanele uyifundele ukuze ube yi-physiotherapist?